Ny loka IFD tafo dia naorina tamin'ny 2013, fantatra amin'ny anarana hoe "Olaimpika" mari-pahaizana indostrialy tafo. Talohan'izay dia natao indray mandeha isan-taona ny kaonferansa IFD sy ny Tompondakan'ny tafontrano ho an'ny tanora manerantany, matetika any amin'ny firenena samihafa eran'izao tontolo izao amin'ny fararano. Hatramin'ny 2013, ny IFD dia nanisy fiovana, mitazona ny kaonferansa IFD sy ny valisoa iraisam-pirenena mandritra ny taona hafahafa, ary ny kaonferansa IFD ary ny fiadiana ny tompondakan'ny tanora manerantany mandritra ny taona maro.
Ny mari-pahaizana injeniera amin'ny taona 2019 dia ny loka fahefatra amin'ny tafo fahefatra. Amin'ity fifaninanana loka iraisam-pirenena IFD ity dia 86 ny tetik'asa fananganana tafo avy amin'ny firenena mihoatra ny 10, anisan'izany i Etazonia, Fanjakana Mitambatra, Alemana, Aostralia, Sina, Eropa, Amerika ary Azia, nandray anjara tamin'ny fifaninanana hahazoana loka lehibe efatra: tafo fisaka , tafo mitongilana, tafo vy ary fikojakojana rindrina ivelany. Taorian'ny fanombanana tsara nataon'ny manam-pahaizana IFD, dia nahazo ny loka ny tetikasa "Hubei Jingmen pengdun winery", natolotry ny Beijing Hanbo Technology Development Co., Ltd., Sina. Sambany koa no nahazoan'i China ny loka IFD Iraisam-pirenena momba ny tafo.
(Hubei Jingmen pengdun divay)
Hanbo ™ dia mifantoka amin'ny fananganana fiarovana ny angovo sy fiarovana ny tontolo iainana. Tao anatin'ny 17 taona, nirotsaka tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana izy, ny fanavaozana ny hevitra, ny endrika tsy manam-paharoa ary ny fitantanana fananganana tsara, ary nahazo mari-pankasitrahana maro momba ny patanty nandritra izany. Ny orinasa dia nivoatra ho varotra, R & D ary famolavolana mpamatsy serivisy serivisy. Ny dingam-pamokarana, ny dingana tsirairay dia afaka maneho ny firindran'ny olombelona sy ny natiora, mampiorina ny natiora, mitsitsy angovo ary miaro ny tontolo iainana, mampiditra ny natiora amin'ny fiainana, ary manatsara ny fiainana salama, ahazoana aina sy azo antoka, toeram-piasana sy toerana onenan'olombelona. zavaboary.